२९ जनाले एकैसाथ पार्टी छोडेपछि भावुक हुँदै प्रचण्डले भने यस्ताे….सबै भावुक बने…. – Ramailo Sandesh
२९ जनाले एकैसाथ पार्टी छोडेपछि भावुक हुँदै प्रचण्डले भने यस्ताे….सबै भावुक बने….
नेकपा माओवादी केन्द्र रित्तिँदै गएको छ । २९ जनाले साथ छोडेपछि प्रचण्ड एक्लिएका छन् । हालसम्म १४ जनप्रतिनिधिसहित २९ जना निर्वाचित पदाधिकारीले माओवादी छाडेका हुन् । जसमा २ राष्ट्रियसभा सदस्य, ४ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
सिरहा नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य सतमलीला दास ताती, ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका– ७ वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापा, कैलाली गौरीगंगा
नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष भागरथी विष्ट, गोदावरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, बर्दगोरिया नगपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरनसिंह बीसी पदमुक्त भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ का टंक आङबुहाङले पनि माओवादी केन्द्र छोडेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पद त्याग गरी उनीहरूको स्थान रिक्त भए पनि निर्वाचन भएको छैन ।
२३ जना माओवादी केन्द्र त्याग गरेकालाई एमाले केन्द्रीय सदस्य बनाइसकिएको छ ।यसरी प्रचण्डलाइ निरन्तर धक्का लाग्न थालेपछि बेलैमा सहिद भएको भए पनि हुन्थ्यो भन्दै आफैलौ धिक्कारेका छन ।
यी हुन् एमाले स्थायी कमिटी सदस्यमा थपिएका ८ जना नेता